> Resource > Video > 3 Talaabada inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka JVC Everio fiidiyo
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka fiidiyo JVC Everio?
Waxaan la yaabanahay hadii ay macquul tahay inuu ka soo kabsado tirtiray videos ka JVC Everio fiidiyo drive adag. Si qalad ah qaar ka mid ah videos waxaan tirtiray ka JVC Everio fiidiyo iyo nasiib darro aanan wareejiyo aan computer. Haddaba sidaas daraaddeed waxaan ka yaabban waxaan iyaga ka soo laabtay my fiidiyo ka heli kartaa. Aan u isticmaalo a JVC Everio 30 GB MicroSD HDD fiidiyo. Waad ku mahadsan tahay soo jeedin.
Saraaxa hadlayay, haddii aadan isticmaali aad JVC Everio ama xogta cusubse waxaa lagu shubaa card SD, waxaad suurto gal kaban karto, JVC Everio tirtiray videos. Waxaad ku xidhi kartaa JVC Everio la your computer oo ay maamulaan barnaamijka dib u soo ceshano tirtiray videos ah.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij soo kabashada loogu talagalay dadka isticmaala in ay dib xogta lumay ama la tirtiro kombiyuutar, kaadhka xusuusta, drive dibadda adag iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo. Tan iyo JVC Everio dib u soo celineysa xogta la card SD ama Compact Flash, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka inuu ka soo kabsado videos aad lumay JVC Everio fudayd.
Hel version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ka dibna waxaad bilaabi kartaa dib u soo kabashada.
Qabtaan JVC Everio Video Recovery in 3 Talaabooyinka
In this article aan buuxiso soo kabashada la Wondershare Data Recovery dadka isticmaala Windows. Users Mac can use version Mac inuu ka soo kabsado videos in howlgallada la midka ah.
Ka hor inta soo kabashada, fadlan hubi in aad fiidiyo JVC Everio ama kaadhka xusuusta ay la aqoonsan karin sida drive adag by your computer.
Tallaabada 1 Select Ladnaansho Mode inuu ka soo kabsado Videos ka Your JVC Everio
Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare Data Recovery on your computer. Waxaa lagu siin doonaa 3 hababka soo kabashada. Si aad u soo kabsado video tirtiray ka fiidiyo JVE Everio, ha isku dayno "lumay Recovery File" hab wada.
Tallaabada 2 Connect Your JVC Everio la Computer iyo Dooro Its Hard Drive in Sawirka
In tallaabadaas, barnaamijka tusi doono oo dhan qoruhu iyo aaladaha kaydinta in your computer. Waxaad u baahan tahay oo keliya mid ka mid ah aad JVC Everio doortaan oo guji "bilow" in iskaan u tirtiray videos.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad awood karaa baaritaan qoto dheer loogu natiijo iskaanka fiican.
Tallaabada 3 Ladnaansho tirtiray Videos ka Your JVC Everio
Ka dib markaas iskaan, dhammaan faylasha helo waa la qori doonaa qaybaha ama waddooyinkiisa. Waxaad ka raadin kartaa videos aad doonayay in bar raadinta. Ka dib hubinta videos aad rabto inuu ka soo kabsado, waxaad iyaga dooran kartaa oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo videos soo celiyo dib si aad u JVC Everio inta lagu guda jiro dib u soo kabashada, ama dib u soo kabashada guuldareystaan ​​laga yaabaa.
Top 10 movie4k si kale oo aad u